Glacier ịme ngosi uwe: ihe ọ bụ, njirimara na mmetụta na enyemaka | Netwọk Mgbasa Ozi
Mgbe anyi huru odida obodo anyi aghaghi iburu n’uche na ndi uzo geomorphological di iche iche bu ndi nwere ike ime ihe ngosi. Ndị a bụ ihe nwere ọrụ ụfọdụ ma nwee ike ịmepụta ụdị ọhụụ na enyemaka ma ọ bụ bibie ndị dị adị. Nke a bụ nguzo na-aga n’ihu na geology nke mbara ala. Otu ụdị ihe na-ahụ maka ọdịdị ala bụ glacier ịme ngosi uwe. a glasia ọ bụ ire nke ice nke ji nwayọ nwayọ na-aga n’oké osimiri ma nwee ike iwepụta icebergs.
N’isiokwu a, anyị ga-agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara ịkwa mma glacier.
1 Kedu ihe bụ glacier shaper
2 Njirimara nke ice na omume ya
3 Ihe ngosi gwụrụ na-adịchaghị mma
Kedu ihe bụ glacier shaper
Mgbe anyị na-ekwu maka ọtụtụ ndị na-ahụ maka ọdịdị ala nke na-arụ ọrụ na mpaghara ala, anyị na-ekwu maka omume na-aga n'ihu nke ihe ndị a na-eme na enyemaka. Dịka ọmụmaatụ, ịdị elu nke usoro ugwu na-eme ka ọ dị ọhụrụ nke ọwa mmiri. Dị ka ọ na-adị, anyị na-ekwu maka ịme ngosipụta nke fluvial nke a na-etinye ụfọdụ ihe n'uche, dịka ikuku, ebili mmiri na ebili mmiri. Ice nwekwara ike ịhazigharị odida obodo dị ka o siri masị ya, ọ bụ ezie na ọ na-eji nwayọọ nwayọọ.
N'adịghị ka ihe a na-echekarị, glacier bụ usoro dị omimi nke na-agagharị n'usoro ugwu oge. Iche na anyị na-ekwu maka ice bụ ịche na ọ bụ ahụ na - adịghị arụ ọrụ nke na - agaghị arụ ọrụ. Otú ọ dị, ọ na-anọgide na-agagharị mgbe ọ bụla n'ihi na, ebe mmiri mmiri mmiri na-enye iwu ka ụmụ irighiri ihe ndị ọzọ jikọtara ha, ọ na-agagharị na glacier n'akụkụ usoro ugwu.
Ebe ọ bụ na ice akachaghị dị ka mmiri, ha na-agbanahụ na-ese n’elu mmiri na ọdọ mmiri na oké osimiri nwere ike ifriizi naanị n’elu ala. N'ụzọ dị otú a, a na-ahapụ ndị ọzọ dị ndụ na ihe ndị dị ndụ na ha ka ha nọgide na-ebi n'okpuru oyi akwa na-enweghị nsogbu ọ bụla. Ọ bụrụ na anyị emee mgbakọ na mwepụ, ice nwere ihe dịka otu ụzọ n’ụzọ iteghete nke mmiri mmiri. Nke a bụ ihe kpatara icerberg ọ bụla ka na-ejigide akụkụ nke itoolu nke ahụ ya n'emeghị.
Glacier ịme ngosi uwe bụ set nke ọcha na-agbanwe a odida obodo karịrị oge. Ebe ọ bụ na glacier na-esi n'otu akụkụ nke usoro ugwu ahụ gaa n'akụkụ nke ọzọ, ọ na-arụ ọrụ ma na-agbanwezi enyemaka niile ọ na-esi na ya agafe. Mgbe ọtụtụ puku afọ gafere na mgbe ọtụtụ narị puku okirikiri nke ice na gbazee, ha na-ejedebe na-akpụzi ọdịdị ala. Nke a bụ ihe anyị na-akpọ glacier shaper.
Njirimara nke ice na omume ya
Iji kwuo okwu banyere ihe dị iche iche na-arụ ọrụ na mpaghara ala a, anyị ga-eburu n'uche njirimara anụ ahụ nke ice. Ọ bụ ihe dị omimi nke dị ezigbo mkpa mgbe ị na-eme ngosipụta ọdịdị ala. A na-ahụkarị ha ka ha dị elu karịa ugwu na mpaghara polar, ebe ọ bụ na ọnọdụ okpomọkụ na-adịkarị ala ma na-enye ohere ịmebe ice na-aga n'ihu. Ka anyị ghara ichefu na maka glacier iji nwee ike ịkpụzi odida obodo ọ ga-adịgide adịgide ruo ọtụtụ afọ na afọ.
Dịka onye na-ahụ maka ọdịdị ala, anyị nwere ike kewaa ọrụ ice n'ime usoro atọ: mbuze, njem na sedimenti. N'ihe banyere glacier dị oke ala, njem bụ obere ihe dị mkpa.
Anyị na-achọta ntughari glacier na mpaghara ebe okpomọkụ na-adịgide adịgide na ogo 0. A na-ahụkarị ọnọdụ okpomọkụ a na mpaghara ugwu dị elu ma kpọọ ya ugwu glacier. Usoro mbuze nke na-eme ice na-ekewa n'ime nnukwu mgbochi abụọ. Nke mbu bu ihe anahu anya dika ihu igwe. Ọnọdụ ihu igwe a abụghị ihe ọzọ karịa ngbanwe nke ihe ndị dị na mbara ala site na ọrụ nke ndị ọrụ mpụga dị iche iche.
Mmiri nwere ikike ịgbasa n'ihi eziokwu ahụ bụ na, mgbe ọ na-agba oyi, ọ na-abawanye olu n'ụzọ megidere ihe ndị ọzọ fọdụrụ na-eme. Nke a pụtara na, ọ bụrụ na mmiri mmiri buru ibu amabawo nke nri okwute ghọrọ nke siri ike, ọ ga - enwe ike ịgba ya ma gbasaa ya n'ike nke na ha ga - eme ka oke nkume gbajie Akụkụ a nke ihu igwe nkịtị ka a maara dị ka gelling. Ọ bụ otu n’ime ụzọ dị mkpa ice ga-esi emebi ụwa.
Ndị glaciers na-agafe ndagwurugwu n'ụzọ yiri nke a na mmiri mmiri kama ọ na-eji nwayọ nwayọ. Ha nwere ike imebi na ibughari ihe a na njedebe nke njem ya ma debe ya n'uzo di iche iche.
Ihe ngosi gwụrụ na-adịchaghị mma
Ihe mbu anyi mere bu nke buut. Ọ bụ mmegharị ma ọ bụ nke ihe ihe okwute ahụ na-aga n'ihu na-ekele site na mwepụ nke na-eme na ala na n'akụkụ nke glacier n'onwe ya. Nke a bụ n'ihi agbaze ebe ndị a glacier.
Ihe nke abuo mara dika abrasion.. Nke a bụ nsonaazụ polishing nke ice nwere ike ịmịpụta n'elu nke ọ gafere na nke ga-ahapụ usoro ụbọchị ndị a ọtụtụ sentimita n'obosara. Mgbalị ndị a nwere ike ikpughe ozi gbasara oge glacier na-agafe ebe ahụ. Ndị ọkà mmụta ihe banyere ala nwere ike ịmata nke bụ ụzọ nke ọganihu glacier.
N'etiti ụdị ndị metụtara glacier ịme ngosi uwe anyị nwere circus glacier. Ọ bụ ụdị metụtara ya nke nwere ike inwe nha dịgasị iche ebe ice na-arụ ọrụ n'ọtụtụ akpịrịkpa. A na-akpọ ya ya n'ihi na ọ bụ ịda mba dị ka ihe egwuregwu na ọ na-eme n'isi ndagwurugwu. A na-amata ya nke ọma dịka ọ nwere ike ịnabata ọdọ mmiri. Inwe ịda mbà na ala nke glacier na-enwekarị ike ịnakọta mmiri site na mmiri ozuzo.
Usoro ọzọ anyị hụrụ bụ ndagwurugwu glacial nke U. Ebe ọ bụ na mbuze nke osimiri dị ike karịa nke glacier, ndagwurugwu na-eme ka mbuba nke osimiri dị nke V, ebe nke glaciers bụ nke U.
N'ikpeazụ, anyị na-ahụkwa drumlins ahụ. Ha bụ ọdịdị dị iche iche nke akụkụ apịtị na mgbochi na-adịghị mma nke mepụtara site na ngagharị nke ice nke na-enweghị ike ime ka ihu ya dum dị elu, pụta. Nke a bụ otu akụkụ siri ike nke fọdụrụ na ndị ọzọ wee kpọọ drumlins.
Enwere m olile anya na iji ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere ịme mmiri glacier.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Geology » Glacier ịme ngosi uwe